Sunday July 05, 2020 - 20:04:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay ka socdaan inta badan magaalooyinka gobolka oromiya iyo deegaanno katirsan gobolka amhara oo ah halka ay degaan amxaaarada dhub boobka ku haya muslimiinta mandiqadda.
War rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda xabashida ayaa lagu sheegay in dhimashada guud ee dadka ku dhintay dagaallada iyo rabshadaha ay gaareen 166 qof halka dhaawacu uu ku dhowyahay laba boqol oo ruux.
Taliye ku xigeenka booliska mandiqadda Oromiya haweenayda lagu magacaabo Jeerma Jiilaam ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhimashadu boqolaal ku dhowdahay islamarkaana gacanta lagu dhigay kumanaan qof oo lagu eedeeyay in ay kicinayeen rabshadaha sida ay hadalka udhigtay.
"rabshadaha ka dhashay dhimashada fanaan Hachalu Hundessa waxay gaartay 166 ruux 145 ruux oo kamid ah dadka dhintay waa shacab halka 11 kamid ah ay yihiin ciidamadada booliska" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay taliska booliska.
Dowladda itoobiya waxay sheegtay in dadka ku dhaawacmay rabshadaha 167 qof oo kamid ah ay xaaladooda caafimaad aad uliidato ayna qabaan dhaawacyo culus, siyaasiyiinta iyo horboodayaasha mucaaradka ee xabsiyada lagu guray waxaa kamid ah Jowhar Maxmed iyo bakeylla gabra oo dhammaantood kasoo jeeda qowmiyadda oromada.
meelaha askarta itoobiyaanka ah lagu dilay waxaa ugu badan Addis Ababa waxaana la sheegay in jabhado hubaysan ooOromo ah ay bambaanooyin nuuca gacanta laga tuura ah ay ku weerareen isku imaatinno ay ku sugnaayeen ciidamda booliska.
inkastoo ay go'anyihiin dhammaan war isgaarsiinta itoobiya sida taleefannada iyo internetka hadane ragga firfircoon ayaa dadaal dheer kadib ku guuleystay in ay soo tabiyaan dhacdooyinka saxda ah iyagoo adeegsanaya farsamooyin gaar ah.
tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Oromiya meelo kamid ah ayaa laga isticmaalayaan internet waxaana lagusoo gubinayaa muuqaallo katarumaha xaqiiqda waxa socda.
Abiy axmed oo ah R/wasaaraha wadanka ayaa kulamo aan kala joogsi laheyn layeelanaya ciidamada melleteriga iyo kuwa sirdoonka waxaana socda baa laleeyahay qaabkii loola tacaamuli lahaa mushkiladahan soo kordhay.
warar horay usoo baxay ayaa sheegayay in saraakiil ciidan oo Oromada kasoo jeeda ay ku caasi garoobeen dowladda ayna lasafteen jabhadaha hubaysan ee qowmiyadda.
Telefeshinka ku hadla afka dowlada Ethiopia ee loo yaqaan ETV ayaaxalay fiidkii baahiyay warbixin ku saabsan dagaal faraha looga gubtey oo ka dhacay deegaanka Axmaarada , Madaxweynaha deegaanka Axmaarada iyo dowlada federal-ka ayaa ku eedeeyey dagaalkas ka dhacay magaaloyin ka tirsan deegaanka Axmaarada Jabhada Oromada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan OLF.
Sidoo kale tobanaan katirsan ciidamada xabashida ee gudaha wadankaas looga yaqaan ciidamada federaaliga ah ayaa lagu dilay Gobalka Arsi Oromia kadib markii ay ciidamadaasi xasuuq ugeysteen dad shacab ah.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamadu ay dileen 22 qof kadibna ay dhalinyaro deegaanka ah oo is hubeeyay ay qaadeen weerar aargoosi ah halkaas oo ay ku laayeen askar badan.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay meydadka ciidamo itoobiyaan ah oo dhulka daadsan,aqoonsiyadoodi,hubkii ay wateen iyo rag hubaysan oo dul taagan islamarkaana muujinayay calaamadaha guusha.